विमानस्थलको सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न : १८ वर्षीय किशोर पासपोर्ट र टिकट बिनै कसरी पुगे विमानमा ? – Sthaniya Patra
विमानस्थलको सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न : १८ वर्षीय किशोर पासपोर्ट र टिकट बिनै कसरी पुगे विमानमा ?
पेरिमिटर सुरक्षाको जिम्मा लिएको सेनाले कमजोरी गरेको आरोप
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट कतारको दोहा उड्न लागेको विमानमा फागुन ९ मा एक जना युवक भेटिए । युवकसँग कतार उड्ने न टिकट थियो न त भिसा लागेको पासपोर्ट नै । राति १० बजेर ४५ मिनेटमा नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमानमा कर्मचारीले चेकजाँच गर्दा कागजात नभेटिएपछि उनलाई विमानबाट झारियो । उनी थिए, रौतहट घर भएका १८ वर्षीय हस्पम आलम ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कडा सुरक्षा घेरा पार गरेर उनी कसरी विमानको बिजनेस क्लास सम्म पुगे ? सो घटनाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । महानगरीय प्रहरी विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयको कमाण्ड अहिले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) भीमप्रसाद ढकालले समालेका छन् । विमानस्थलको मूल गेटबाट जानेहरूलाई एसएसपी ढकालले पासपोर्ट र प्रिन्ट गरेको टिकट देखाउनुपर्ने नियम बनाएका छन् । तर, चोरबाटो प्रयोग गर्नेहरू निर्बाध जहाजसम्म पुग्छन् ।
पासपोर्ट र टिकट बिना नै बिजनेस क्लासको सिटमा गएर बसेका आलम १ महिना अघि पनि त्यसै गरी विमानमा पुगेका थिए । तर, प्रहरीले सो समस्या समाधानमा ध्यान नदिँदा उनी दोस्रो पटक विमानसम्म पुगेका छन् । विमानका कर्मचारीले थाहा नपाएको भए आलम पक्कै दोहा पुग्ने थिए ।
आलम कोटेश्वर तर्फबाट विमानस्थलको पेरिमिटर नाघेर जहाजमा पुगेको विमानस्थलका एसएसपी भीम प्रसाद ढकालले बताए । उनले भने–‘उता बारहरूबाट गएको देखिन्छ, हामी अनुसन्धान गर्दै छौँ ।’​ हस्पमलाई अहिले महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालामा राखिएको छ । उनको मानसिक सन्तुलन ठिक नभएको प्रहरीको भनाई छ । विमानस्थलको आगमन र प्रस्थान कक्षको सुरक्षा जाँचमा प्रहरी खटिएको हुन्छ । तर, विमानस्थलको पेरिमिटर सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनाले लिएको छ । सैनिकको कमजोरीका कारण आलम कोटेश्वरतर्फबाट हिँडेर विमानसम्म पुगेको विमानस्थलमा कार्यरत एक जना प्रहरी अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए ।ratopati
बर्दघाट खानेपानीको साधारणसभा
मुख्यमन्त्री राईद्वारा ल्होसार पर्वकाे शुभकामना
रुकुम घटनामा संलग्न दोषी उपर कारवाही नभए संर्घषमा उत्रिने…
वैशाख १७ र २७ गते आमनिर्वाचनको घोषणा